चैत ११ गतेबाट लागू गरीएको लकडाउन अन्त्य भएको सरकारको घोषणा – BFM 91.2
काठमाडौं, ७ साउन । कोरोना महामारीका कारण लागु गरीएको ‘लकडाउन’ गएराती बाट अन्त्य भएको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकभर चैत ११ गतेबाट लागू भएको लकडाउन मंगरबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, निजी सवारी–साधनमा लगाउँदै आएको जोर–बिजोर प्रणाली पनि हिजो देखी हटाइएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने निर्णयसमेत गरेको छ ।
हाल होटलहरु बन्द नै छन् भने रेस्टुरेन्टहरुमा ‘प्याकिङ’ र ‘टेक अवे’ सेवामात्र दिने अनुमति छ । तर, सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न भने पाइने छैन ।सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बधी कार्यालय पनि साउन १५ बाट खोल्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।सरकारी कार्यालयमा हाल भइरहेको दुई ‘सिफ्ट’को व्यवस्था पनि अन्त्य गरिएको छ ।अब विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुने मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक यातायात खुलेपछि सरकारी कार्यालय पनि नियमित १० देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
← इजाजत पत्रको दुरुपयोग गरेर काठ तस्करी
कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु →
प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ हत्याको विरोधमा मोरङका सवै विद्यालय आज बन्द
प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री अत्याबश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने